Fil d'actualités du 22/01/2019
22/01/2019 - 17:00 : FANATANJAHANTENA: Voafidy faninefany ho filohan'ny Komity Olaimpika Malagasy na ny COM i Siteny Andrianasoloniaiko tamin'ny fifidianana natao androany 22 janoary. Tsy nanana mpifaninana izy.
22/01/2019 - 15:00 : BAOLINA KITRA: Voasazin'ny tribonaly Espagnole 23 volana an-trano maizina sy onitra 14,5 Millions Euro ilay lohalaharana Portugey Christiano Ronaldo noho ny hosoka tamin'ny fandoavan-ketra ny taona 2011 sy 2014.
22/01/2019 - 14:30 : BNGRC: "Noho ny orana dia aoka ho mailo amin ny fihotsahan ny tany ireto faritra MENA ireto Ambohipotsy Andafy Avaratra Manjakamiadana Andohamandry Ampamarinana".
22/01/2019 - 14:15 : ANDRY RAJOELINA: Naneho fiaraha-miory sy nirary fiononana feno amin’ireo fianakaviana mana-manjo noho ny fihotsahan'ny tany teto an-dRenivohitra ity Filohan'ny Repoblika ity androany.
22/01/2019 - 13:50 : FAMPIANARANA: Mbola hiato mandritra ity herinandro ity ny fampianarana any Ambanja, Antsiranana, Nosy Be noho ny rano miakatra naha dibo-drano ny sekoly marobe, raha ny fanazavan'ny lehiben'ny CISCO any Ambanja.
22/01/2019 - 13:30 : MAHAJANGA: Dibo-drano ny ankamaroan'ny faritra iva, saingy tsy mbola misy kosa ny traboina hatreto, hoy ny ben'ny tanàna Mokthar Salim Andriantomanga.
22/01/2019 - 13:15 : FIKAROHANA IREO TOTOTRY NY TANY: Efa somary hita soritra ny misy ireo olona 4 mbola tsy hita tototry ny tany eny Tsimialonjafy Andohalo satria noho ny fofona mivoaka saingy matevina ny tany ka mananosarotra ny fanesorana izany.
22/01/2019 - 12:55 : ORINASA AMBATOVY: Nanolotra fanafody sy kojakoja fampiasa amin'ny fitsaboana (seringues, cathéters, perfuseurs) tao Toamasina ny Orinasa Ambatovy ho fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny valanaretina kitrotro.
22/01/2019 - 12:30 : FANILON'I MADAGASIKARA - FIANTSOANA VONJY: "Miangavy antsika skoto rehetra, lehilahy, vehivavy izay afaka hanome tanana izao maraina izao ny mpamonjy aina eny Andohalo mba ho avy miaraka amin'ny angady sy "seaux" ho fikarohana ny vatana mangatsiakan'ny vady sy ny zanaky ny Filoha Iombonana Fanilon'i Madagasikara teo aloha Nini Raharimanana, izay namoy ny ainy ihany koa. Mitondra foulard".
22/01/2019 - 12:00 : ROLAND RATSIRAKA: Mandeha ny resaka fa i Rolland Ratsiraka no mety hotendrena ho governoran'i Toamasina. Izy izany no hanatanteraka ilay fampanantenana hoe Toamasina ho lasa tahaka an'i Miami ?
Archive du 20181220
Marc Ravalomanana “Efa mandresy isika…”
Nihaona tamin’ireo mpiara-dia aminy tetsy amin’ny foiben’ny K25 Belair Ampandrana halina Atoa Marc Ravalomanana, fifampizarana vaovao sy fhaonana voalohany taorian’ny
Hosoka ara-pifidianana Andrasana izay hafitsoky ny fitsarana
Tsy takona nafenina ny karazana hosoka sy teti-dratsy maloto tamin’ny fifidianana, izay nisy ny tsy tanteraka fa misy kosa ireo mety tontosan’ireo olon-dratsy. Nisy hatramin’ny fitifirana ka nahafaty olona roa tao amin’ny Birao fandatsaham-bato iray tany Ankazoabo Atsimo.
Vondrona Eoropeanina “Aoka samy hiandry am-pitoniana ny voka-pifidianana
Amin`ny ankapobeny dia tsy dia nahitana olana ireo biraom-pifidianana teto an-dRenivohitra notsidihan`ireo mpanara-maso avy amin`ny Vondrona Eoropeanina saingy nahatsikaritra birao tara fisokafana na dia resaka fandaminana anefa izany.
Filoham-pirenena ho avy eo Mila mamerina ny hasin’ny politika, hoy Dany Rakotoson
Tontosa iny ny fifidianana na dia maro toy ny efa nitranga tamin’ny fihodinana voalohany ihany aza ny tsy fahatomombanany. Isan’ny naneho ny heviny mikasika izay ny mpanao politika, Dany Rakotoson.
Vondrona iraisam-pirenena CIS- Emo Noraràna tsy hanara-maso ny fifidianana
Ankoatran-dry zareo avy ao amin’ny Ceni na ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana eto amintsika dia voalaza fa ilaina koa ny fanampian’ireo fanaraha-mason’ireo vondrona iraisampirenena hafa, raha fintinina sy tsiahivina ny ambetin-dresaky ny avy eo anivon’ity vaomiera ity.
Hentitra i Dada “Tsy ekena ny korontana, atokisako ny mpitandro filaminana”
Faly aho, tena faly fa nahavita ny adidiko, hoy ny kandida laharana faha 25 amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena fiodinana faharoa, Marc Ravalomanana, raha naneho ny heviny tetsy amin’ny biraom-pifidianany etsy Faravohitra omaly.
Fanodikodinam-bato “Ho gadraina avokoa izay tratra” hoy ny CENI
Tranga anisan`ny nahoraka nandritra ny androm-pifidianana omaly dia ireo biletà tokana nivoaka tao Ambohipo. Tsy nifanaraka tamin` ny isan`ny fitaovana voarakitra an-tsoratra tao anaty baoritra omaly maraina teo satria fitaovana miisa 12 natokana amina biraom-pifidianana 12 no tokony tao anatin`ny baoritra saingy 11 sisa no hita tao.
Fandresena amin’ny fifidianana Miankina amin’ireo faritra be mpifidy
Miandry izay ho voka-pifidianana isika amin’izao fotoana izao hoe: iza amin’ireo kandida roa no ho voafidy hitondra ny firenena? Efa misy ny ampahany amin’ny voka-pifidianana mivoaka amin’ny haino aman-jery samihafa, saingy mbola tsy hahafahana mamantatra ny mety ho lany aloha hatreto.
Fifidianana fihodinana faharoa Nihena ny taham-pahavitrihan`ny mpifidy
Nahatratra 32% ny mpifidy nandray anjara hatramin’ny 12 ora raha 44% izany tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany, raha ny nambaran`ny Ivotoerana SAFIDY nandritra ny valan-dresaka niarahana tamin`ny mpanao gazety omaly, ary raha ny fahitana azy omaly takariva dia manodidina ny 40% mahery kely izany raha toa ka 53% tamin’ny fihodinana voalohany.
Madagasikara Tafaray Hanara-maso hatramin’ny vokatry ny HCC
Isan’ireo fikambanana nilatsaka nanara-maso ny fizotry ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa teny amin’iny boriborintany faharoa iny omaly ry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Madagasikara tafaray izay tarihin’ny filohany, Mbola Rajaonah.
Praiministra Ntsay Christian Tsy mazava ny teny heviny
Tsy dia nazava loatra tamin’ireo mpanao gazety nantsoina teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo omaly alarobia tolakandro 19 desambra 2018 ny tena hevitry ny praiministra Ntsay Christian tamin’ny
Voka-pifidianana fihodinanana faha-2 Ilaina ny fiaraha-manamarina azy
Ahian’ny maro hiteraka korontana eto amin’ny firenena ity fifidianana fihodinana faharoa ity noho ny sahoan-dresaka nanodidina azy efa ho andro maromaro izay ary indrindra ny zava-nitranga omaly nialoha sy nandritra ny fandatsaham-bato.
Hosoka tamin`ny fifidianana Maro be ny fitoriana voaray
Maro loatra ny fitoriana sy resaka manodidina ny fanaovana hosoka tamin`ity fihodinana faharoa ity. Manoloana izany, nampita vaovao ny Lehiben’ny Fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, Razafimelisoa Odette Balisama.
Manakory indray ianao ry Jean aa ! Io indray ianao aa! Dia tsy mba afaka ny hiova mihitsy kosa ve ee!
Klioban’ny Cospn Analamanga Mbola nahazo 10.000.000 ariary hafa indray
Rehefa avy notoloran’ny ministeran’ny filaminana anatiny taratasim-bola nitentina 10.000.000 ariary sy omby roa ary taratasy marim-pankasitrahana sy fitsangantsanganana mankany Nosy be Hell Ville, niampy taratasim-bola nitentina 3.000.000 ariary
« Basket Tournoi U 10 sy Super-Vétérans » Analamanga Amin’ny 12 sy 13 janoary indray ny tohiny
Tontosa tamin’ny 15 sy 16 desambra teo teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny fifaninanana rejionaly Analamanga “Tournoi U 10 sy Super-Vétérans 2018”. Anisan’ireo katita nandray anjara tamin’izany ny klioban’ny Jcba, Mb2All, Bcr, Cbbt, Helaskbi, Bcsm ary ny Asf.
Basket Challenge Baobab andiany faha-10 Ekipa 10 no handrasana any Mahajanga ny 22-30 desambra izao
Tapitra omaly alarobia 19 desambra 2018 ny fisoratana anarana hahazoana mandray anjara amin’ny fifaninanana basikety baolina “Challenge Baobab”
Tsipaky ny miala aina
Vita ihany iny ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena na henjakenjana aza ny dingana nolalovana. Samy miandry am-pitoniana izany isika saingy misy ny miezaka mandrangaranga sandry sy mitady hanakorontana.
Fampandrosoana ny firenena Tsy maintsy miara-mientana sy miasa miaraka…
Be dia be ny ratra navelan`ny endriky ny fifampitondrana nandritra ny dimam-polo taona mahery.
Fampianarana teknika 19 mianadahy nahazo vatsim-pianarana ho any Maroc
Ankizy 19 mianadahy nanaraka fiofanana manokana teny anivon’ireo lisea teknika manerana ny Nosy no nahazo vatsim-pianarana hiazo an’i Maroc ary hiainga amin’ny Alahady ho avy izao eto an-tanindrazana.
Nirefotra ny cocktail molotov omaly tolakandro tetsy Itaosy. Tsy fantatra ny fiaviany ary natao tao anatin’ny tavoahangy coca ny pitsopitsony izay nampirefotra azy.
Nampita hafatra miisa fito ho an’ny vahoaka malagasy iraimanontolo iny omaly iny ny filohan’ny fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM, Irako Ammi Andriamahazosoa. Isan’ny hafatra nampitainy moa ny hoe mivavaha fa manova zavatra io ary arovy ny fahamarinan’ny fifidianana.
Kojakoja ho an’ny fety Mitohy ny fihenam-bidy eny amin’ny Baolai
Amin' ny fotoanan' ny fety toy izao, dia ny karazana kojakoja electronika na « electromenager » no mahasarika ny olona maro.
Entana lany daty miparitaka Roa isam-bolana ny fitarainana voarain’ny RNDC
Miha mahazo vahana eto amintsika tato anatin’ny enim-bolana farany izao ny fiparitahan’ireo karazan’entana lany daty eny an-tsena izay tena mora tokoa ny vidiny.
Vidim-borona ankatoky ny fety Efa ho 120.000 Ar ny vorontsiloza iray
Andro vitsy sisa no isaina dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely isika. Ankoatra ny kilalao hamalifaliana ny ankizy dia tsy afa-misaraka amin’izany ny sakafo matsiro toy ny akoho amam-borona izay marihina fa efa tena midangana tokoa ny vidiny eny an-tsena amin’izao.
Hetra aloa Fa mankaiza marina ?
Madagasikara dia firenena faha-145 mikambana ao amin’ny tambazotra iraisam-pirenena mifanakalo traikefa sy ny mangarahara ho fanatsarana ny fampidiran-ketra nanomboka aogositra 2017.
Fanitarana ny fifanakalozana ara-barotr’i Madagasikara 87 332 000 dolara avy amin’ny BAD
Nisy ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa ny amin’ny tetikasa fanamorana ny lalam-barotra sy ny fandraharahana ataon’i Madagasikara amin’ny Tsena iombonan’ireo faritra atsimo sy atsinanan’i Afrika (COMESA) sy ny firenena ao amin’ny Oseana Indiana.